1 Makoronike 26:1-32
26 Mapoka evachengeti vemagedhi aiva aya:+ PavaKora+ paiva naMesheremiya+ mwanakomana waKore wevanakomana vaAsafi. 2 Mesheremiya aiva nevanakomana ava: Zekariya ndiye aiva dangwe, Jedhiyaeri ari wechipiri, Zebhadhiya ari wechitatu, Jatinieri ari wechina, 3 Eramu ari wechishanu, Jehohanani ari wechitanhatu, Erieho-enai ari wechinomwe. 4 Obhedhi-edhomu+ aiva nevanakomana ava: Shemaya ndiye aiva dangwe, Jehozabhadhi ari wechipiri, Joa ari wechitatu, Sakari ari wechina, Netaneri ari wechishanu, 5 Amieri ari wechitanhatu, Isakari ari wechinomwe, Peuretai ari wechisere; nokuti Mwari akanga amukomborera.+ 6 Mwanakomana wake Shemaya akaberekerwa vanakomana vakanga vari vatongi veimba yababa vavo, nokuti vakanga vari varume vaikwanisa, vaiva nesimba. 7 Vanakomana vaShemaya, Otini naRefaeri naObhedhi, Erizabhadhi, aiva nehama dzaiva varume vaikwanisa, Erihu naSemakiya. 8 Ava vose vaiva vevanakomana vaObhedhi-edhomu, ivo nevanakomana vavo nehama dzavo, varume vaikwanisa vaiva nesimba rokuita basa, makumi matanhatu nevaviri vakanga vari vaObhedhi-edhomu. 9 Mesheremiya+ aiva nevanakomana nehama, varume vaikwanisa, gumi nevasere. 10 Hosa wevanakomana vaMerari aiva nevanakomana. Shimri ndiye aiva mukuru, nokuti baba vake vakamugadza kuti ave mukuru+ kunyange akanga asiri dangwe;+ 11 Hirikiya ari wechipiri, Tebhariya ari wechitatu, Zekariya ari wechina. Vanakomana vose nehama dzaHosa vaiva gumi nevatatu. 12 Pamapoka aya evachengeti vemagedhi, vakuru vacho vaiva nemabasa akangoita seaiitwa nehama dzavo,+ okushumira paimba yaJehovha. 13 Naizvozvo vakakanda mijenya+ nokuda kwevaduku zvakangofanana nevakuru maererano nedzimba dzemadzibaba+ avo, nokuda kwemagedhi akasiyana-siyana. 14 Mujenya wokumabvazuva wakabva wabata Sheremiya.+ Vakakanda mijenya nokuda kwomwanakomana wake Zekariya,+ gurukota+ raiva noungwaru, mugove wake ukabuda uri wokuchamhembe.+ 15 Obhedhi-edhomu akava nowake kumaodzanyemba, uye vanakomana vake+ vakava nematura.+ 16 Shupimu naHosa+ vakava nowavo kumavirira pedyo neGedhi reShareketi pedyo nomugwagwa mukuru unokwidza kumusoro, boka revarindi+ rakatarisana nerimwe boka revarindi;+ 17 kumabvazuva kwaiva nevaRevhi vatanhatu; kuchamhembe kwaiva nevana zuva rimwe nerimwe; kumaodzanyemba kwaiva nevana zuva rimwe nerimwe,+ uye pazvinhu zvakanga zvakachengetwa+ paiva nevaviri vaviri; 18 kunzira yakaiswa denga yaiva kumavirira, vana vaiva pamugwagwa mukuru,+ vaviri vari panzira yakaiswa denga. 19 Aya ndiwo akanga ari mapoka evachengeti vemagedhi evanakomana vevaKora+ neevanakomana vaMerari.+ 20 KuvaRevhi, Ahija ndiye aitarisira pfuma+ yeimba yaMwari wechokwadi nokutarisira pfuma yezvinhu zvakaitwa zvitsvene.+ 21 Pavanakomana vaRadhani,+ ivo vanakomana vomuGeshoni wokwaRadhani; ivo vakuru vedzimba dzemadzibaba dzaRadhani muGeshoni, paiva naJehiyeri.+ 22 Vanakomana vaJehiyeri, Zetamu nehama yake Joeri,+ ndivo vaitarisira pfuma+ yeimba yaJehovha. 23 KuvaAmramu, nevaIzihari, nevaHebroni, nevaUzieri,+ 24 Shebhueri+ mwanakomana waGeshomu mwanakomana waMosesi ndiye aiva mutungamiriri aitarisira zvinhu zvakanga zvakachengetwa. 25 Kuhama dzake, kwaEriyezeri+ kwaiva nomwanakomana wake Rehabhiya+ nomwanakomana wake Jeshaya nomwanakomana wake Joramu nomwanakomana wake Zikri nomwanakomana wake Sheromoti. 26 Sheromoti uyu nehama dzake ndivo vaitarisira pfuma yose yezvinhu zvakaitwa zvitsvene,+ zvakanga zvaitwa zvitsvene namambo Dhavhidhi+ nevakuru vedzimba dzemadzibaba,+ nevakuru vezviuru nevemazana, nevakuru veuto. 27 Zvinhu zvakabva kuhondo+ nezvakanga zvapambwa+ vakanga vazviita zvitsvene kuti vagadzirise imba yaJehovha. 28 Nezvose zvakanga zvaitwa zvitsvene nomuoni+ Samueri naSauro mwanakomana waKishi naAbhineri+ mwanakomana waNeri naJoabhi+ mwanakomana waZeruya.+ Chose chakaitwa chitsvene chero nomunhu upi zvake chakanga chichitarisirwa naSheromiti nehama dzake. 29 PavaIzihari,+ Kenaniya nevanakomana vake ndivo vaiva vatungamiriri vebasa raiitwa kunze+ uye vari vatongi vaIsraeri.+ 30 PavaHebroni,+ Hashabhiya nehama dzake, varume chiuru nemazana manomwe vaikwanisa,+ ndivo vaitarisira vaIsraeri vakanga vari munzvimbo yaJodhani kumavirira pabasa rose raJehovha nebasa ramambo. 31 PavaHebroni, Jerija+ ndiye aiva mukuru wevaHebroni maererano nezvizvarwa zvavo maererano nemadzitateguru. Mugore rechimakumi mana+ roumambo hwaDhavhidhi ivo vakatsvakwa, uye varume vaiva vakashinga, vaiva nesimba, vakawanikwa pakati pavo muJazeri+ raiva muGiriyedhi.+ 32 Hama dzake, varume vaikwanisa,+ vaiva zviuru zviviri nemazana manomwe, vakuru vedzimba dzemadzibaba.+ Naizvozvo mambo Dhavhidhi akavagadza kuti vatarisire vaRubheni nevaGadhi nehafu yedzinza revaManase,+ nokuda kwenyaya dzose dzaMwari wechokwadi nenyaya+ dzamambo.